My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၂၈ – ၆ – ၂၀၁၅	12
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူများမပြောနဲ့ ကိုယ့်အမျိုးတွေ ကိုယ် ပြောရတာကို အာပေါက်ပါတယ်ဆို။
မြစပဲရိုး says: . မြ တစ်ယောက် ခေါင်း တစ်ခါခါ ဘဲ လုပ်နေနိုင်တော့သည်။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်မို့ အသဲကြားက မဲတစ်ပြားအကြောင်းကို သိပ်မပြောဖြစ်…
kai says: အသဲကြားက မဲတပြား… ဆိုတာမှာ.. အသဲဆိုတာ.. Liver ကိုယ်စားပြုလား.. Heart ကို ကိုယ်စားပြုလား သိချင်လို့ပါ။
padonmar says: ပဏ္ဍိတာရာမ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တပည့် ဦးသုနန္ဒ FB မှာ ရေးထားတဲ့ စာပါ။
padonmar says: Su Da added5new photos.
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ကြီးရေ လက်တွေ့မှာတော့ ဒီမဲပေးဘို့ စိတ်ဝင်စားခြင်း မစားခြင်းက လူနည်းစုဖြစ်နေတာက အမှန်တရားပါ
Alinsett @ Maung Thura says: အသီးကောင်းကောင်း သီးပေးနိုင်တဲ့ သစ်ပင်
Mike says: .ဒေါ်မြစာကလေးစာဖတ်နေရင်းပင် အိမ်ကမဒမ်မိုက်ထံက ဖုန်းဝင်လာသည်..
.ပေးအုံးမှာ…ကိုယ်အားကိုးရာကို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ဦးကြောင်ကြီး says: အခြေအနေ မကောင်းဗူး…။ မဘသမွှေတာ ဒီချုပ် အီစိမ့်အောင် ခံနေရတယ်။ အားလုံး ဘွားဒေါ်ကို အပျစ်တင်ရမည်။ မှားတာနဲ့ မမှန်တာနဲ့ ဟိုဖက်က ဆိုးလွန်းနေလို့သာ ဒီလောက်ခံတာ..။ ဘွားဒေါ်နေလျှာ ကိုမိုးတီးသာဖြစ်ကြည့်… ပွဲပြီးနေပီ..။
မြစပဲရိုး says: တစ်နှစ် ရှိသွားပြီပေါ့။ အကွေ့တစ်ကွေ့ ကိုလဲ ချိုးခဲ့ပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: လီဘမျော်